अमेरिकाबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई भने, “देश डुब्दैन, म आउँदैछु” | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
अमेरिकाबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई भने, “देश डुब्दैन, म आउँदैछु”
सूर्य थापासँग भएको संवादको भिडियो सहित
प्रकाशित मिति १३ आश्विन २०७५, शनिबार १५:४८ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका बेला बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसदमा गरेको भाषणप्रति ओलीले अमेरिकाबाटै जवाफ दिएका छन् । आफू स्वदेशमा नभएका बेला नेता नेपालले बोलाएको स्थायी कमिटीको भेलाबारे चित्त दुखाउँदै प्रधानमन्त्रीले प्रदेश कमिटी गठनको निर्णयको बचाउ गरेका छन् ।
अमेरिकामा रहेर पत्रकारिता गर्दै आएका सूर्य थापासँग ३७ मिनेट लामो अन्तरवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने- ‘म दुईचार दिन संयुक्त राष्ट्र संघतिर आएँ । कतिपय नेताहरुले बोलेको सुनियो, लौन देश डुब्न लाग्यो, कोही त आऊ बचाऊ । म फर्केर गइहाल्छु, त्यसकारण यो ठूलो समस्याको कुरो होइन ।’
बरिष्ठ नेता माधव नेपालले प्रदेश कमिटी सम्बन्धी सचिवालयको निर्णयप्रति जनाएको असन्तुष्टिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘असन्तुष्टिका लागि असन्तुष्टि’ मात्र भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग पत्रकार थापाले गरेको लामो कुराकानीको सम्पादित अंश
केही मान्छेहरुमा अलिकति कुण्ठा देखिन्छ । त्यो कुण्ठा पोख्नका लागि विभिन्न प्रकारका कुराहरु गरेका छन् । अहिलेको यो सरकारले बजेट बनाउँदा नबनाउँदा वषर्ायाम सुरु भइसक्यो । सरकार गठन गर्दा नगर्दा यसैवीचमा देशभरिका बाटा बनाइसक्न त सम्भव थिएन । तर, यसवीचमा तीन दिनमा एउटाका दरले तुइनहरु विस्थापित भएका छन् । झोलुंगे पुलहरु बनेका छन् । र, बाटाहरु बनेका छन् । ﻿
पार्टी भनेको बजारमा भेला भएका मान्छे होइनन् । कोही माछा किन्न, कोही साग किन्न गएको हुन्छ । कोही बेच्न गएको हुन्छ, कोही अरु नै केही कामलाई गएको हुन्छ । विभिन्न कामले गएका हुन्छन् । विभिन्न उद्देश्यले गएका हुन्छन् । तिनको गन्तव्य पनि एउटै हुँदैन, उद्देश्य पनि एउटै हुँदैन
साले चामलको बोरामा प्वाल पार्‍यो अरे भन्ने सुन्यो भने ल यस्तो सरकार ! मुसाले चामलको बोरामा प्वाल पारुञ्जेल के हेरेर बस्यो ? नालायक सरकार भनेर कराउने । यो खालको राजनीतिक संस्कृति जुन छ, यो एकछिनका लागि हो । दयालाग्दो संस्कृति हो यो । यसलाई संस्कृतिका रुपमा जो उठाउन खोजेका छन्, केही खर्थ छैन यसको
हैन, केही मान्छेहरु सबै काम छाडेर यसैमा लागेका छन् । जसरी पनि विरोध गर्ने । तिनको सम्बन्धमा त मलाई केह िटप्प्णीस् गर्नु छैन । तपाईले हेर्नु भयो भने ‘यो सरकारले के गर्दैछ, हत्या हिंसा बलात्कार गर्दैछ…’ के यस्तै हो र ? कबे यो सरकारले हत्या हिंसा र बलात्कार गरिाखेको छ ? यस्ता बकबास गर्ने बकबासीहरुका सम्बन्धमा त हामीले केही कमेन्ट गर्नु छैन ।
पत्रकार सूर्य थापाले ‘यु स्टार्ट अगेन’ का लागि लिएको भिडियो वार्ताको पूर्णपाठ हामीले यहाँ साभार गरेका हाैं ।
अन्सारी ३० हजार घुसहित पक्राउ
विराटनगर । मोरङको लाटिझोडा सव डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सलाउद्दिन अन्सारी ३० हजार घुसहित पक्राउ परेका छन् ।
सेवाग्राहीलाई काठ काट्न…
काठमाडों । सरकारले ८ वटा कडा रोग लागेका बिरामीको उपचारमा विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रममार्फत एक बर्षमा झन्डै साढे दुई…
छोरीको हत्या र बलात्कारका आरोपीलाई छुटाउन आमा नै तम्सिएपछि…
काठमाडाैं । काकाकी छोरीलाई बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले थालेको अनुसन्धानमा पीडित परिवारबाटै असहयोग भएको छ । बलात्कारपछि…
दरबन्दी मिलाउँदै महानगरपालिका
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले यहाँ आवश्यक दरबन्दी टुंगो लगाउने भएको छ । पहिले उपमहानगरपालिका हुँदाको दरबन्दी अहिले पर्याप्त नभएकाले…
गायक रमेशकुमारले ल्याए ‘नम्बरी चप्पलमा’
काठमाडौं । गायक रमेशकुमार श्रेष्ठले ‘नम्बरी चप्पल’ बोलको आधुनिक गीत रिलिज भएको छ ।
गायक श्रेष्ठले ओएसआर युट्युब च्यानलबाट शुक्रबार…
रत्न मन्दिरलाई शाहवंशीय राजतन्त्रको प्रतीकका रुपमा सङ्ग्रहालय बनाइने
काठमाडाैं । कास्की पोखरास्थित फेवातालको किनारामा अवस्थित रत्न मन्दिरलाई गण्डकी प्रदेशको सरकारले सङ्ग्रहालयका रुपमा विकास गर्ने तयारी गरेको छ…